POS System, POS Machine, POS Cash Register, barcode Printer, Printer Rasiidka - Aokia
Xararad barcode Scanner
Data ururinta barcode Scanner
khaanadda lacag caddaan ah
Rasiidka Paper Roll
Label barcode warqad yar
sababta dooran aokia
Aokia mar walba ayaa aaminsan in qiimaha ma aha oo dhan ee ganacsiga, waxaan u heshaan guul-guul for xiriirka caalamka oo dhan.
Waxaan dad qiimaha via qiimaynta suuqa, qiimaha macquulka ah labadaba tari. Aokia waa brand caan ah oo
tayo leh waa laf dhabarka, waxaan xakameeyo marxalad kasta si ay u buuxiyaan heerarka tayada. Dhammaan xubnaha Aokia fiirsan
macaamiisha sida xubnaha qoyska, kooxdayada adeegga macaamiisha ku siinayaa taageerada ugu fiican oo xal in weydiimaha.
58mm Mobile Xararad Rasiidka Printer
Midab warqad kulul
Mini Printer barcode kulul Direct
Android Xararad POS Terminal
Soo Bandhigida mishiinka POS cusub
ka shaqeeya makhaayadaha iyo bar ah waxaa la soo xilalka muhiimka ah oo adag iyo howlgalka sida dhibic ee sale, processing bixinta, kontaroolka alaabada, la xisaabtanka maaliyadda, macaamiisha statistics, maamulka shaqada, ki ...
wadaagto aad riyo la Aokia
Waxaan kuu soo diri doonaa news iyo faa'iidooyinka muhiim ah in aad mail. Aan ku sii dabajiraan. Mahadsanid.